Psychology of ubudlelwano: indlela pick up amantombazane ngoba amazwi enhle
Ubudlelwane phakathi abathandi ngezinye izikhathi okusikhumbuza entwasahlobo ice. Kwezinye izindawo okuhlala isikhathi eside, aqinile futhi ukujamelana umthwalo eside. Futhi ngezinye izikhathi elicibilikile, baba mncane futhi esobala. Isinyathelo kuso - ngakho nakanjani sibe sesikhathini polynya.
Thina ukuziqhakambisa isimo
Khumbula isisho amazwi omusa ngisho ikati nice - hhayi nje indoda. Ikakhulukazi akufanele skimp on kubo lapho ubuhlobo kuphela abopha akhiwa. amazwi Nice sokuba namantombazane njalo eyolanda izinto kalula. Into esemqoka ukuthi abanazo futhi isimo. Ngokwesibonelo, ngisho noma leyo nsizwa yayenga uma uhlangana sibalo enhle, amafomu njengabesifazane we ntokazi, musa ukumtshela ngakho lapho beqala ukuhlangana. Girl kungase kubonakale ngokungadingekile idedelwa, luhlaza, vulamehlo ezinjalo ngeke ukudida futhi baphike wenhlanganyelo iyashesha, kubalulekile ikakhulukazi kusaqalwa ukuphola. Kodwa ukuze udumise smile wakhe, izinwele amahle, ikhono ukudansa noma into efana naleyo, hlangothi, kodwa ezihlobene mathupha kuye: - kahle kakhulu. Lawo mazwi enhle sokuba namantombazane njalo, ngakolunye uhlangothi, kusho okuningi ngoba ukukhonza njengephayona isignali ye isimo sengqondo sabantu abasha maqondana nabo, ngakolunye uhlangothi, banjalo engabophi. Kulokhu, kokubili imibhangqwana omele uzizwe ku-nokuwumisa alinganayo, okuyinto ikakhulukazi kusiza Kuhlangana.
Isikhathi esining impela kubalulekile hhayi kuphela kulokho okushiwoyo, kodwa indlela. amazwi Nice sokuba namantombazane njalo angeke athi ulondekile, ovele - bamane nje ukufinyelela umgomo, noma siqonde njengoba ihlaya. Kodwa ngokweqile okunoshukela, ngokweqile engacabanganga miqondo kakhulu hhayi zinkulu. A guy singaba njengesihluthulelo umlingisi ezimbi, nozwela phezu ingxenye ladies kwathiwa ngokusobala akubona ukwandisa. Futhi iningi kuyoba amahloni ngoba umdlalo inkohliso. Ngakho-ke, kufanele izinsizwa ukukhumbula umthetho elula: amazwi nice amantombazane izwakala umculo enhle, uma ephelezelwa uhlobo, ukumamatheka mnene, kukhulunywa ngobuqotho, ngemfudumalo, futhi kakhulu, ngaphandle intavyu. Futhi ake guy ukhathazekile, namahloni, unamahloni - lutho olungalungile kulokho. Kunalokho, aba maningi isisindo nokuvuma kwakhe. Kodwa uma uhlu lwakho amazwi uyabukeka intombazane ukuthi protaratorit efana isevisi zabasebenzi ikhefu - siqala yena kuphela ukuba asolwe, umphumela omuhle ngeke zisebenze.
Nakuba intsha yanamuhla iyona ngempela uninhibited futhi ukuvuthwa zakuqala, akukho zimfihlo mayelana ubudlelwane obufanele, ka izitho zomzimba owesilisa nowesifazane lapho lineminyaka 12-14 ngabo alikho, uma kuziwa esikhathini nokuba uthando, ngisho kakhulu 'eziphambili "futhi unfettered ngokuvamile abazi ukuthi liziphathe kanjani. Futhi elahlekile - amanye amagama enhle ukusho intombazane ukumjabulisa. Yini ongayenza ukweluleka? Qala elula. Uma intsha benana izinombolo zocingo, njalo ekuseni, ngesikhathi esifanayo le nsizwa ungathumela ukubingelela yakhe ayithandayo SMS. Ekuqaleni, makube ibinzana evamile nge isifiso osukwini oluhle, sikufisela inhlanhla nokunye. D. nje amagama ambalwa, kodwa ngokushesha kuyoba bamukelekile, futhi inhliziyo Juliet yesimanje iqala ukushaya ngokushesha lapho callsigns abangane. Futhi ngaleso sikhathi, ebuhlotsheni obuqine nakakhulu futhi ukufudumala, ikakhulukazi siqu, futhi unothando bangaba umyalezo. Kusihlwa SMS efanayo, kuphela isifiso ubusuku obuhle. Njengoba ubuhlobo eba lapho umfana intombazane aphethwe ngaphezulu amazwi nesibindi, futhi unothando futhi uhlobo babé buyingxenye engokwemvelo nenhle yokuxhumana kwansuku zonke. Futhi akudingeki ukuba skimp. "AboMdabu", "cute", "okuhle", "ukugwinya" nabanye kungase kuthathe indawo kahle evamile "zine", "i-NPA uNatasha", "Tan". Ngokukhethekile usungula into obizayo. Zonke izinto ezivela umphefumulo, qiniseka ukuthi baziswa, futhi ephendula umuntu omusha uzothola isisa efanayo.
Yiba nomusa komunye nomunye, ngobuqotho, futhi konke kuzolunga!
4 imikhuba ezokwenza ngcono ukubukeka kwakho
IKhabhinethi "Healthy Ebuntwaneni" emtholampilo - kuyini futhi kungani zikhona?
Iphuzu liyikhebula. Izici zamamodeli wanamuhla